Sukusebenzisa ii-AirTags ukufumana izilwanyana zasekhaya okanye abantwana | Ndisuka mac
Sukusebenzisa ii-AirTags ukufumana izilwanyana zasekhaya okanye abantwana
Ewe, ukusetyenziswa kwezi AirTags kuninzi kwaye ngokuqinisekileyo abanye babasebenzisi bavela eMac baya kusothusa ngezinye ezinomdla ngokwenene, kodwa UApple ucebisa ukuba ungazisebenzisi ezi zixhobo njengendawo yokufumana abantwana okanye izilwanyana zasekhaya.
Kucacile ukuba wonke umntu angazenzela unothanda ngabo kwaye thina, njengoApple, asinaxanduva lokusetyenziswa kwezi zixhobo xa sele zisezandleni zakho, kodwa ayingomntu okanye isilwanyana "Ingcebiso" kukuba uyisebenzisela izinto kuphela.
Ezi zixhobo zenzelwe ngokukodwa ukufumana izinto, hayi izinto eziphilayo. Inkampani yaseCupertino iyalumkisa oku kwaye ikwacebisa ukuthengwa kweApple Watch yabantwana ekhaya ukuba sifuna ukubanakho. Le iya kuba lolona khetho lufanelekileyo lokuba nomtya othe ngqo kunye nabantwana, kuba ii-AirTags phakathi kwamanye amanqaku amaninzi ayinikezeli nayiphi na impendulo okanye uncedo kwimeko yengxaki.
Sicinga ukuba umsebenzisi ngamnye uza kwenza le nto ayifunayo ngee-AirTags kuba zezabo kwaye akukho mntu kufuneka abaxelele ukuba bazisebenzisa njani, nangona kuyinyani ukuba azenzelwanga le nto kwaye inkampani ngokwayo ayikukhuthazi olu hlobo lokusetyenziswa.
Baninzi abasebenzisi abaqale ukufumana ezi zixhobo namhlanje ke ukuba ufuna ukuphawula ngendlela onamava ngayo nabo, yabelana ngezimvo ezingezantsi kweli nqaku, siya konwaba ukukufunda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Sukusebenzisa ii-AirTags ukufumana izilwanyana zasekhaya okanye abantwana